China Ice Pack စက်ရုံနှင့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူများ Huizhou
Huizhou ဂျယ်လ်ရေခဲသေတ္တာများသည်အဓိကအားဖြင့်လတ်ဆတ်သောအစားအစာနှင့်ဇီ ၀ ဆေးဆိုင်များနှင့်သူတို့၏အအေးခန်းသို့တင်ပို့စဉ်အပူချိန်အထိခိုက်မခံသောပစ္စည်းများအတွက်အဓိကထုတ်လုပ်သည်။ သူတို့ကအေးမြ - အပူလွှဲပြောင်းမှတဆင့်တစ် ဦး တည်းအထုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အောက်မှာရောက်စေဖို့ထင်နေကြသည်။
1.Huizhou ဂျယ်လ်ရေခဲထုပ်များကိုအဓိကအားဖြင့်ထုတ်လုပ်သည် လတ်ဆတ်သောအစားအစာနှင့်ဇီဝဆေးဆိုင် အဖြစ်ကောင်းစွာအဖြစ်အခြား အပူချိန်အထိခိုက်မခံပစ္စည်းများ သူတို့ရဲ့ကာလအတွင်း အအေးကွင်းဆက်တင်ပို့။ သူတို့ကအေးမြ - အပူလွှဲပြောင်းမှတဆင့်တစ် ဦး တည်းအထုပ်တစ်ခုအတွင်းရှိအပူချိန်ကိုထိန်းချုပ်အောက်မှာရောက်စေဖို့ထင်နေကြသည်။
၂။ Gel Ice Pack သည်အတွင်းပိုင်းအအေးနှင့်အပြင်ဘက်အဖုံးပါသောအဆင့်ပြောင်းလဲမှုပစ္စည်း (PCM) မှပြုလုပ်ထားသည် နောက်ကျောဘက်မှာ။အအေးကွင်းဆက်အပူချိန်ထိန်းချုပ်မှုထုပ်ပိုးမှုအတွေ့အကြုံနှစ်ပေါင်းများစွာရှိသည့်ကျွန်ုပ်တို့၏ gel gel သည်ကောင်းမွန်သောအပူချိန်ထိန်းချုပ်မှု၊ အရည်အသွေးပိုမိုမြင့်မားစေရန်နှင့်လိုအပ်ချက်အမျိုးမျိုးအတွက်ကျစ်လစ်သိပ်သည်းသောထုပ်ပိုးမှုများအတွက်ကောင်းစွာတီထွင်ထုတ်လုပ်ထားပါသည်။
၃။ အေးခဲနေသောအေးပြီးဖြစ်သည့်စတုရန်းပေအစားအတွင်းဘက်ထောင့်လေးထောင့်ပတ်လည်တွင်ကောင်းမွန်သောပုံသွင်းထားသောအအေးရေခဲထုပ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ပေးနိုင်သည်။ The round-angle ရေခဲထုပ် အထုပ်ကိုအလွယ်တကူခြစ်ရာရေမြှုပ် EPS box ထဲမှာဖြစ်လျှင်အမှု၌ပိုမိုသင့်လျော်ပါလိမ့်မယ်။
1.Gel Ice Pack သည်အေးမြ။ ပူသောလေပူဖလှယ်ခြင်း (သို့) လျှပ်ကူးခြင်းမှတစ်ဆင့်ပတ် ၀ န်းကျင်သို့အေးမြမှုရှိစေရန်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။
၂။ လတ်ဆတ်သောအစားအစာလယ်ကွင်းများအတွက်၎င်းတို့သည်အသား၊ ပင်လယ်စာ၊ သစ်သီးနှင့်ဟင်းသီးဟင်းရွက်များ၊ ချက်ပြုတ်ထားသောအစားအစာများ၊ အေးခဲသည့်အစားအစာများ၊ ရေခဲမုန့်၊ ချောကလက်၊ သကြားလုံး၊ ပန်းများ၊ အလှကုန်များ၊ နို့နှင့်စသည်တို့
ဆေးဆိုင်များအတွက်၊ Gel Ice Pack ကိုဇီဝဓာတုဓာတ်ပြုဆေး၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနမူနာများ၊ တိရစ္ဆာန်ဆေးကုသမှုဆေးဝါး၊ ပလာစမာ၊ ကာကွယ်ဆေးအစရှိသည်တို့ကိုတင်ပို့သည်။
၄။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအသုံးပြုရန်အတွက်၎င်းတို့သည်ပထမ ဦး ဆုံးအကူအညီ၊ နာကျင်မှုသို့မဟုတ်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိစေရေးအတွက်အဖျားကျစေနိုင်သည်။
တစ်ချိန်တည်းမှာပင်ဂျယ်လ်ရေခဲထုပ်ကိုနေ့လည်စာအိတ်ထဲတွင်အအေးထည့်ထားသည့်အအေးခန်းများ၊ အအေးခန်းများ၊ တောင်တက်စခန်းများ၊ အပန်းဖြေစခန်းများ၊ ပျော်ပွဲစားများ၊ လှေများနှင့်ငါးဖမ်းခြင်းများတွင်အအေးခံရန်အအေးခံအိတ်များကိုထည့်ထားပါက၎င်းတို့သည်အပြင်ဘက်တွင်အသုံးပြုနိုင်သည်။
အကယ်၍ အေးခဲနေသော gel gel pack ကိုသင်၏ရေခဲသေတ္တာထဲသို့ထည့်ပါက၎င်းသည်လျှပ်စစ်ဓာတ်အားချွေတာခြင်း (သို့) အအေးမိခြင်းများကိုကာကွယ်နိုင်ပြီးပါဝါပိတ်ထားပါကရေခဲသေတ္တာအပူချိန်တွင်ထိန်းသိမ်းထားနိုင်သည်။
အဆင့် - ပြောင်းလဲမှုအပူချိန်
Non- ယက်ပိတ်ထည် -10 ℃， -15 ℃， -18 ℃， -25 ℃，
100 ၁၃ * ၈
250 ၁၈ * ၁၁
1. အဆိပ်မရှိသော (အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများသည်အဓိကအားဖြင့်ရေ၊ မြင့်မားသောပေါ်လီမာ) ဖြစ်ကြပြီး၎င်းတို့နှင့်စမ်းသပ်စစ်ဆေးသည် ခံတွင်းခံတွင်းအဆိပ်သင့်မှုအစီရင်ခံစာ။
အတွင်းပိုင်းပစ္စည်းများမှမြင်နိုင်သောဒီဇိုင်းအထိရရှိနိုင်သော 4. စိတ်ကြိုက်ရွေးချယ်မှုများ
1. အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုသေချာစေရန်, သူတို့သည်တစ် ဦး အတွက်အပြည့်အဝအေးခဲနေသောသေချာအောင်ပေးပါ
Gel Ice Pack ကိုသက်တမ်းကုန်ဆုံးမတိုင်မီအကြိမ်ကြိမ်အသုံးပြုနိုင်သည်။
ရှေ့သို့ ရေထိုးရေခဲ Pack ကို